२०७७ माघ १२ सोमबार १०:३०:००
देश संघीयतामा गएपछिको पहिलो राष्ट्रिय जनगणना सुरु हुन अब १ सय २४ दिन मात्र बाँकी छ । जनगणनाका लागि आवश्यक सामान खरिद र प्रश्नपत्र छपाइको काम सकिएको केन्द्रीय तथ्यांक विभाग, जनसंख्या शाखा प्रमुख ढुण्डिराज लामिछानेले जानकारी दिए । ‘त्यसबाहेक जिल्ला–जिल्ला पुर्‍याउनका लागि सामानको प्याकिङ गर्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने । प्रचार–प्रसारको सामग्री तयार भइसकेको छ भने २० जना राष्ट्रिय प्रशिक्षकको तालिम सकिएको छ । २ फागुनदेखि ६० मास्टर ट्रेनरको तालिम हुँदै छ । उनीहरूले जिल्ला जनअधिकारी र प्रदेश कार्यालयका जनअधिकारीलाई तालिम दिनेछन् । त्यसैगरी, चैचदेखि ४ महिनाका लागि सबै प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा जनगणना कार्यालय स्थापना गरिँदै छ ।
त्यसैगरी, सरकारी निकायमा दर्ता नभएकाहरूको विस्तृत विवरण, विदेशमा रहेका परिवारका अनुपस्थित सदस्यहरूको पनि तथ्यांक संकलन गरिनेछ । जसमा कुन व्यक्तिले के काम गर्छन् ? कस्तो काम गर्छन् ? उनीहरूले काम गर्ने ठाउँमा कस्तो उत्पादन हुन्छलगायतका तथ्यांकहरू संकलन गरिने श्रेष्ठले जानकारी दिए । सामुदायिक प्रश्नावली वडास्तरमा हुनेछ । यसमा पनि हाउसहोल्डबाट प्राप्त भएका तथ्यांकलाई भेरिफाई गर्ने काम हुन्छ । जसबाट वडास्तरमा राजस्व संकलनको स्रोतको तथ्यांक, कृषिजन्य उत्पादन र निकासी तथ्यांक, वडास्तरको आम्दानीको स्रोतबारे विवरण लिइनेछ ।
सात स्थानीय तहमा ट्याबलेटमार्फत तथ्यांक संकलन
यो जनगणनामा पहिलोपटक काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिका, मध्यपुर थिमी नगरपालिका, चन्द्रागिरि नगरपालिका, कीर्तिपुर नगरपालिका, नागार्जुन नगरपालिका र दक्षिणकाली नगरपालिकामा ट्याबलेटमार्फत तथ्यांक संकलन गरिने भएको छ । त्यसका लागि आवश्यक ट्याबलेट खरिद गर्ने कार्य सकिएको छ भने आवश्यक सफ्टवेयर निर्माण भइसकेको छ । अब परीक्षण थालिएको छ । आसन्न जनगणना जनगणनाको १२औँ शृंखला हो ।
राष्ट्रिय जनगणनामा भाषिक राजनीति